, कोरोना भाइरसको उपचारमा असुरो प्रयोग धेरै उपयोगी हुनसक्ने सम्भावना
नेपालमा परम्परादेखि श्वास-प्रश्वासको समस्या रूघा र खोकीमा प्रयोग हुदै आएको जडिबुटी असुरो चलाएर फाइदा लिने काममा जुटौं !
48800 पटक पढिएको
कोरोना भाइरसको वास्तविक कारक कोब्रा सर्प क्रेएइटबाटै हुनसक्ने बताइएको छ । चिनियाँ सर्प क्रेएइटबाटै यो भाइरस फैलिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । जुन कोब्रा प्रजातिको मानिन्छ र यस्ता सर्प अति विषालु तथा खतरनाक हुने गरेको मानिन्छ ।
धेरैजसो मध्य र दक्षिणी चीन तथा दक्षिण-पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा यस्ता सर्प पाइन्छ । यस्ता सर्पको डिसबाट बनेका परिकारहरू चाइनामा बनाएर खाने गरेकाले यो भाइरस फैलिएको हुन सक्ने अनुमान लगाईएको छ ।
कोरोना भाइरस हावाबाट सर्ने रोग भनेको छ । यस्ता रोग पहिले जनवारमा विषेश गरेर स्तनधारी पसुको श्वास-प्रश्वासको माध्यमबाट एक अर्कामा सर्ने गर्दछ । यो रोग सर्दा पहिलो लक्षण रूघा फ्लूको रूपमा देखिन्छ ।
कोरोना भाइरसको सक्रमण हुनासाथ ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु,श्वास-प्रश्वास छिटो भन्दा छिटो चल्न थाल्नु, सास फेर्न गारो हुनु र निमोनिया जस्तो लक्षण देखिन थाल्दछ । कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारका लागि अहिलेसम्म कुनै भ्याक्सिन वा एन्टिभाइरस उपलब्ध छैन ।
यस्तो अवस्थामा हामीले नेपाली जडिबुटी असुरो (बसाका) प्रयोग गरेर फाइदा उठाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । कोरोनाका रोगीलाई यसको सुप बनाएर खान दिएर यसको फाइदाबारे अध्ययन गर्न सकिने देखिन्छ । खेर गएको जडिबुटीबाट यो जस्ता श्वास-प्रश्वाससंग रिलेटेड अनेकौं रोगमा प्रयोग गरेर लाभ लिन सकिनेछ ।
यदि यो रोगमा फाइदा देखिएमा यसको औषधि निर्माण गरेर देश तथा विदेशमा पठाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । यस्को सेवनले कुनै पनि प्रकारको हानी नगर्ने र यस्तो औषधिको सेवनले श्वास-प्रश्वास सम्बन्धित रोगमा धेरै नै फाइदा हुन सक्ने परम्परादेखि प्रयोगबाट देखिएको छ ।
कोरोना भाइरसको बारेमा रोचक जानकारी
यसरी गरौ नोवल कोरोना भाइरसको उपचार
*डा. राम बहादुर बोहरा नेपाल वैकल्पिक चिकित्सा विकास परिषद नवलपरासीको अध्यक्ष, बरिष्ट आयुर्वेद डाक्टर, नेपालपत्रको स्वास्थ्य स्तम्भकार तथा साइन्स इन्फोटेकका सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।